नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष डा. भीमबहादुर रावल र उपमहासचिव घनश्याम भुसालले आफ्नो बाटो क्लियर गरेका छन्। दुबै जनाले नेकपा एमालेको आगामी दशैं महाधिवेशनमा अध्यक्षका लागि उमेदवारी दिने घोषणा गरेर आगामी बाटो क्लियर गरेका हुन्।
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष डा. भीमबहादुर रावल र उपमहासचिव घनश्याम भुसालले आफ्नो बाटो क्लियर गरेका छन्। दुबै जनाले नेकपा एमालेको आगामी दशैं महाधिवेशनमा अध्यक्षका लागि उमेदवारी दिने घोषणा गरेर आगामी बाटो क्लियर गरेका हुन्। ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
नवौँ महाधिवेशनबाट कडा प्रतिस्पर्धाका विच एमालेको अध्यक्ष बनेका केपी ओली दशौँ महाधिवेशनमा पनि एक कार्यकाल थप अध्यक्ष बन्ने गरी अघि बढेका छन्। उनीसँग प्रतिशपर्धाका लागि रावल र भुसालले चुनौति दिने भएका हुन्।
ओलीसँग प्रतिष्पर्धा गरेर अध्यक्षनै बन्ने व्यक्ती नदेखिए पनि एमाले उपाध्यक्ष भिम रावल र उपमहासचिव घनश्याम भुषालले दशौँ महाधिवेशनमा आफूलाई अध्यक्षको प्रत्यासीका रुपमा उभ्याउँन थालेका छन्। अध्यक्षका सबैभन्दा बलिया प्रत्यासी महासचिव इश्वर पोखरेल भने यो दौडबाट बाहिरिएका छन्।
एमालेउपाध्यक्ष भीम बहादुर रावल र पार्टी उपमहासचिव घनश्याम भुसालबीच पार्टी अध्यक्षका लागि घम्साघम्सी हुने देखिएको छ। भुसालले जसको नीति उसकै नेतृत्व’को सिद्धान्त अनुसार मंसिरमा हुन लागेको दशौं महाधिवेशनमा अध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने संकेत गरेका छन् भने रावल त यसअघि नै अध्यक्षमा उठ्न सक्ने भन्दैं सार्वजनिक रुपमै सिग्नल दिइसकेका छन्।
‘हाम्रो पार्टीको विधानमा नै केन्द्रीय कमिटी पदाधिकारी भइसकेको व्यक्ति अध्यक्षको उम्मेदवार बन्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ,’ उनले अगाडि भने, ‘दशौं महाधिवेशनमा त्यही अनुसार अघि बढ्न सकिन्छ।अन्य पदाधिकारी साथीहरु पनि अध्यक्षका लागि योग्य हुनुहुन्छ। एमालेको मूल नेतृत्व लिन म आफैँ पनि योग्य छु।
उनले आफूहरुले ओलीसँग आत्मसमर्पण गरेको नभइ ओली नै आफ्नो विचारमा सहमत हुने विन्दुमा आइपुगेको तर्क गरेका छन्। ‘हामीले उठाएका कुरामा केपी ओलीले हिजो बिमत्ति देखाउनु भएको थियो। तर ती विषयमा उहाँ आज सहमत हुनुभएको छ,’ उनले भने, ‘संसद विघटन प्रकरणमा पनि उहाँ छलफलका लागि तयार हुनुभएको छ।
विधान महाधिवेशनमा हामीले कुरा उठाएका थियौं। तर त्यसबारे हरेक कमिटीमा लगेर विवादित नगरौं भन्ने कुरा हो। यीसहितका विषय पार्टीभित्र गम्भीर रूपमा राखेका छौं। संसद विघटनबारे पार्टीमा छलफल हुनेछ। ओली त्यसमा तयार हुनु भएको छ।
विधान महाधिवेशनले पारित गरेका नीतिबारे मंसिरमा हुने महाधिवेशनमा पनि छलफल हुने तर्क उनले गरे। विधान महाधिवेशनले जे निर्णय गर्छ, नेतृत्व चुन्ने महाधिवेशनमा छलफल हुन्छ भनेका हौं। दशौं महाधिवेशनको केही कुरा अझै सकिएको छैन,’ उनले भने।
पार्टीलाई सैद्धान्तिक रूपमा नसच्याइ राजनीतिक मामिलामा कांग्रेस–माओवादीलाई गाली गरेर मात्रै केही हुँदैन। भुसालले एमालेले आँट गरेर परिवर्तन नरोजेमा समस्या हुने बताए। एमाले प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट गुज्रिँदै आएको हो। हाम्रो सामूहिकता र संगठन प्रणाली पछिल्लो समय बिग्रेको छ।
हाम्रो संगठन प्रणाली ध्वस्त हुँदैछ,’ भुसालले थपे, ‘दशौं महाधिवेशन कहाँ हुँदैछ भन्ने पनि हामीबीच छलफल भएन। संस्थागत प्रणाली भत्किएकाले जताततै ओली मात्रै देखि। स्ट्याचुदेखि बुख्याचासम्म ओली नै थिए, विधान महाधिवेशनमा पनि।
यस्तै जारी रहे एमाले अझै ठूलो संकटमा जाँदैछ। उनले व्यक्तिले विधि बनाएर अरु हिँड्ने कुरा गलत भएको बताए। ‘पार्टीले संस्थागत विधि बनाएर सबै हिँडौं, व्यक्तिले विधि बनाएर अरू हिँड्नु पर्छ भन्दा हाम्रो प्रणाली भत्किएको छ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गजबको घटनाहरुले निरन्तरता पाइरहेका छन् । यी रोचक घटनाहरुबीच अर्को रोचक घटना हुने संकेतहरु देखिएको छ । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र तीनवटै दल खारेज हुनसक्ने देखिएको छ।
उनीहरु संविधानसभामार्फत् आफैले जारी गरेको संविधान पालना नगर्दा खारेजीको अवस्थामा पुग्न लागेका हुन्। संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ बमोजिम दल दर्ताका लागि निवेदन दिंदा राजनीतिक दलले पूरा गर्नुपर्ने शर्तमा ५ वर्ष या विशेष परिस्थितिमा साँढे ५ वर्षभित्र पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ भनिएको छ।
तेस्तै, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १३ मा कुनै दलले ऐन वा अन्य संघीय कानून बमोजिम निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्ने अन्य विवरण वा प्रतिवेदन नबुझाएमा वा संविधान वा संघीय कानून बमोजिम दल दर्ता हुन पूरा गर्नुपर्ने शर्त पूरा नगरेमा त्यस्तो दलको दर्ता कायम नरहने उल्लेख छ ।
२०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा कुनैपनि दलको पदाधिकारीको निर्वाचन साँढे ५ वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राख्ने काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरु नै प्रमुख हुन्। उनीहरुले यो संविधानलाई विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनेका थिए । तर, संविधानको धारा २६९ मा लेखिएको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था उनीहरु आफैले पालना गरेनन्।
तर, नेकपा नाम जुधेर सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदियो। २३ फागुन २०७७ को यो फैसलाले दुवै पार्टीको स्थिति पूर्वअवस्थामा पुग्यो। संविधानको धारा २६९ लाई आधार मान्ने हो भने एमालेको कार्यसमिति अवैधानिक भइसकेको छ । माओवादी पनि अवैधानिक भइसकेको छ।
निर्वाचन आयोगमा दुवै दल दर्ता हुन सक्ने अवस्था छैन। एमाले आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएको छ। माओवादी नयाँ कार्यसमिति चयनतर्फ गम्भीर छैन। संविधानमा स्पष्ट रुपमा साँढे ५ वर्षभित्र नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नुपर्ने भनिएकाले उक्त अवधिभित्र पदाधिकारीको निर्वाचन नगर्ने एमाले र माओवादी केन्द्र खारेज हुनसक्छन्।
काँग्रेसको अवस्था पनि त्यही छ। नेपाली राजनीतिमा लामो इतिहास बोकेका पार्टीहरु खारेज हुने बाटोमा पुगेका छन्। तर तीनै पार्टीले महाधिवेशनको मिति तय गरिसकेकाले पार्टीको नाम जोगिने झिनो आशा बाँकी नै छ।